justfreeman: november 2011
NLD အမှတ်တံဆိပ် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုမည်
သဲသဲ တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၄၃ မိနစ် .
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLDပါတီ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သောခမောက်ပုံကို ပါတီပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရာ၌ အသုံးပြုတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဘာကိုပြောင်းမယ်ဆိုတာစိတ်ကူးမရှိသေးဘူး။ဒါပေမယ့်ခမောက်တံဆိပ်လိုဂိုကတော့ကျနော်တို့သုံးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဝိဝါဒ ဖြစ်စရာတွေရှိနေလို့။”ဟုNLD၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအုန်းကြိုင်ကမဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပါတီတံဆိပ် ပြောင်းမည်ဖြစ်သော်လည်း ပါတီအလံအား ပြောင်းလဲရန် မရှိဟုဆိုသည်။
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အခြားပါတီတခုကခမောက်တံဆိပ် အသုံးပြုထားသဖြင့် NLD ပါတီ၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို အခြားတံဆိပ်ဖြင့် ပြောင်းလဲ မှတ်ပုံတင်ရန် စီစဉ်နေခြင်းဟုလည်း သိရသည်။
ပါတီ၏အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းရန်နှင့်ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်လာမည့် သီတင်းပတ်အတွင်းဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်များအစည်းအဝေးကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ပါတီ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ကာလာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် NLD၏ ဗဟိုကော်မတီဝင်များက ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြသည်။
NLDသည်၁၉၉၀ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့်ပါတီ၉၃ပါတီအနက်ခမောက်ကို ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်သင်္ကေတအဖြစ်အသုံးပြုသည့်တခုတည်းသောပါတီဖြစ်သည်။ထို့ပြင်နှစ်ပေါင်း၂၀ကျော် ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် ပါတီသက်တမ်းတလျှောက်တွင်လည်း ခမောက်တံဆိပ်ကို အစဉ်တစိုက် အသုံးပြုခဲ့သည်။
သို့သော် ၂၀၁၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်NLDပါတီ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ(NDF)က ခမောက်ပုံအား ပါတီ အမှတ်တံဆိပ် အဖြစ် အသုံးပြုသဖြင့် NLDက ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံ ကန့်ကွက်ရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
ပါတီ၏ အမည်၊ အလံနှင့် အမှတ်တံဆိပ်တို့ကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ လျှောက်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့် အခြားပါတီတခု၏ အမည်၊ အလံ၊ အမှတ်တံဆိပ်တို့နှင့် တူညီလျှင် သို့မဟုတ် ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ်နေလျှင် ကွဲပြားစေ ရန် ကော်မရှင်က ညွှန်ကြားရမည်ဟု နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
Posted by justfreeman at 12:300comments
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၂၆ မိနစ် .
၂၀၁၁ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ၁၈ရက်နေ့သည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွက်မျှသာမဟုတ်၊ ကျန်အတိုက်အခံဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအားလုံးနှင့် မြန်မာပြည်သူများအတွက် အမှန်ကတယ် သမိုင်းဝင် ခရီးတခု စတင်တော့ မည့်ရက်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်၂၃နှစ်တာကာလတလျှောက်လုံးပြည်သူများကဒီမိုကရေစီပြည့်ဝသည့်မြန်မာနိုင်ငံ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်သွေးချွေးနှင့်ရင်း၍တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်။နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD)ပါတီက တရားဝင် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်၊ သမိုင်းတွင်မည့် ခြေလှမ်းတရပ် စလိုက်ပြီး နိုင်ငံ၏ အအောင်မြင်ဆုံး ဒီမိုကရေစီပါတီ တရပ်အဖြစ် မြင်တွေ့နိုင်ရန် ယင်း၏အခန်းကဏ္ဍကို ဆက်လက်လှုပ်ရှား ဦးဆောင်သွားလိမ့်မည်ဟု ယူဆရသည်။
NLDပါတီမှတ်ပုံတင်ကာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဗဟိုကော်မီတီအဖွဲ့ဝင်၁ဝ၆ဦးကတခဲနက် အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။သို့သော်အချို့ပါတီခေါင်းဆောင်အနည်းစုကယခုအပြောင်းအလဲများ အပေါ် အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် ယခင် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရသစ်အပေါ် ယုံကြည်မှုပေးရန် အချိန်စောလွန်းသေးသည်ဟု အမြင်ရှိကြသည်။
ပါတီတရားဝင်ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်နောက်ရန်ကုန်မြို့NLDရုံးချုပ်ရှေ့ရှိ ထောက်ခံသူများအကြားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြင်တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ)
သို့သော်လည်းလူတိုင်းလိုလိုကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်ဒီမိုကရေစီ ရှေ့တိုးဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတွင် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍက ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်သည်ကို သဘောတူထားကြသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေနှင်းခဲပျော်ချိန်သေချာရောက်ပြီဟုယူဆရတော့မည်။ အဓိကကျသည့် အတိုက်အခံ ပါတီကြီးကပြန်၍မှတ်ပုံတင်မည် ဆိုခြင်းကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန် အားကောင်း မြန်ဆန်လာစေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၈၈- ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပိုမိုလွတ်မြောက်လာဖို့ မျှော်လင့်ရသည်။
နေကြသည့် ကိစ္စဟု ဆို၍ရနိုင်သည်။လေ့လာသူများ၏ အဆိုအရ ဒီဇင်ဘာလဆန်းတွင် လာရောက်မည့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စ ဟေလာရီ ကလင်တန်မလာမီ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ထပ်မံ လွတ်မြောက်လာဖွယ် ရှိမည်ဟုလည်း ပြောဆိုနေကြသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ယူရတော့မည်ဖြစ်ရာ လာမည့်နှစ်များတွင် ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ ရှိနေသည်။ မြန်မာ အစိုးရအနေနှင့် ဒေသအရေး ကိစ္စများကို အတိုက်အခိုက် ကင်းကင်းဖြင့် ဦးဆောင်ရန် အရေးသာခဲ့ပြီဖြစ်၍၊ ဒေသ ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးပူးပေါင်းမှုအတွက် ချီတက်နိုင်ရန် တိုးမြှင့်ကြိုးပမ်းရန်သာ ရှိတော့သည်။
အစောပိုင်းကာလများကစစ်အစိုးရ၏၂ဝ၁ဝရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး၊မဝင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ NLD ပါတီအတွင်းနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ ရှိခဲ့သလို၊ NLDပါတီတရားဝင်ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်သင့်၊ မတင်သင့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ပါတီတွင်းရော၊ ပါတီပ၌ပါ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ အပြင်းအထန်ရှိခဲ့ရာ အကွဲအပြဲရလဒ်များလည်း ရှိခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ NLDပါတီ၏ အချို့ခေါင်းဆောင်များ ပါတီမှနှုတ်ထွက်ကာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF)အမည်ဖြင့် ပါတီသစ်တရပ်ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။သူတို့က၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး ကိုယ်စားလှယ်နေရာ၁၆ နေရာ အနိုင်ရခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်က NLDပါတီအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဆိုပါက၊ထောင်ကျခံနေရသူများကို နိုင်ငံရေးပါတီများတွင်ပါဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားသည့် ထူးခြားဆန်းကျယ်သည့် ဥပဒေရှိခဲ့သည်။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ၊ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံခြင်း၊ သမ္မတ၏ မိသားစုနှင့်အတူ ညစာဖိတ်ခေါ်ဧည့်ခံကျွေးခဲ့ခြင်း စသည့်ဖြစ်ရပ်များအပါအဝင်၊ အပြုသဘော ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပိုမိုလွတ်မြောက်လာသည့်ကိစ္စ၊ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်များ ဖြေလျော့ပေးလာခြင်း၊ အစိုးရက တိုင်းရင်းသား အပစ်ရပ်အုပ်စုများကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန်အတင်းအကျပ်တောင်းဆိုနေသည့်မူဝါဒများကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ခြင်း စသည့်တိုးတက်မှုများကိုလည်း တွေ့လာရသည်။
သို့သော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြီးလေးပြီး မဖြေရှင်းနိုင်သေးသော ပြဿနာအရေး များစွာရှိနေသေးသည်။ ကချင် တိုင်းရင်းသား အုပ်စုများအပေါ်စစ်ရေးထိုးစစ်များ ဆက်လက်ဆင်နွှဲနေဆဲ ဖြစ်သလို၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများလည်း အကျယ်အပြန့် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များစွာလည်း မလွတ်မြောက်သေးဘဲ ရှိနေကြသေးသည်။
အမှန်ကတယ် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရရှိဖို့ဆိုလျှင် အစိုးရအနေဖြင့် ယင်းပြဿနာများကို စောလျင်စွာ အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းရမည် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ NLDပါတီက ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များကို ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ဖြစ်လာနိုင်သည့် နောက်တဆင့်မှာ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီများ အနေဖြင့် ထိရောက်သည့် ညွန့်ပေါင်း အင်အားစု ကို စုစည်း၍ ပါလီမာန်အတွင်း၌ လွှမ်းမိုးထားသည့် ယခင်စစ်အစိုးရနွယ်ဖွား ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီအစိုးရကို ဖိအားပေးနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
NLDပါတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အပေးအယူရလဒ်မှထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်သလို၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ှင့်NLDပါတီကယခင်မူများကို ပြောင်းပြန်၊ ပြန်လှည့်ခဲ့ခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ ဆက်လက် ကျန်ရှိနေသေးသည့် နိုင်ငံရေး အိပ်မက်အတွက် ကဏ္ဍမျက်နှာစာတခု ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်စုက မကြာသေးမီက "ယခုသည် အစ၏ အစ"ဟု ပြောဆိုခဲ့သေးသည်။ သို့သော် ဆက်၍ ရင်ဆိုင်ရန် စိန်ခေါ်မှုပြဿနာများစွာ ရှိနေပါသေးသည်။ ဒီမိုကရေစီနည်းမကျသည့် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်၊ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် သွေးထွက်သံယိုမှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုများကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ရန်၊နိုင်ငံစီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရန်နှင့် ပြည်သူများကို စွမ်းရည်အာဏာ မြှင့်ပေးရန် စသဖြင့်လုပ်ဆောင်စရာကိစ္စများစွာကျန်နေပါသေးသည်။ယင်းအိပ်မက်များအတွက် နိုင်ငံရေးကွင်းပြင်အတွင်း ထိုက်တန်စွာ တိုက်ခိုက်ယူရဦးမည်လည်း ဖြစ်ပေသည်။
Posted by justfreeman at 12:060comments
ယနေ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသည်အလွန်သိမ်မွေ့နက်နဲသောအချိန်သို့ရောက်နေသည်ဟုဆိုလျှင်မှားမည်မထင်ပါ။ ပြည်သူလူထုကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၂၀၀၈ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုပြီးစစ်တပ်ကျောထောက် နောက်ခံပေးထားသောစစ်ဗိုလ်လူထွက်အများစုနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အစိုးရ၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆိုပြီး ပေါ်ပေါက်နေသည်ကို မြင်တွေ့နေရပါသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာတော်လှန်ရေးကောင်စီ၊မဆလ၊နဝတ၊နအဖဟုအမည်အမျိုးမျိုးတပ်ကာစစ်တပ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာရှင်စနစ်ဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်း၍အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာမှယနေ့အမည်ခံဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရန်ခြေလှမ်းစလှမ်းနေပြီဖြစ် သည်။
ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်အာဏာရှင်ကြီးဦးနေဝင်း၏၂၆နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့သောမဆလအစိုးရကို၁၉၈၈ ခုနှစ်ကလူထုဆန္ဒပြသည့်နည်းဖြင့်ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့သော်လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခံခဲ့ရပါသည်။
ဆက်လက်၍ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်၊ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့ကနဝတ၊နအဖဆိုပြီး၂၃နှစ်နီးပါးရက်စက် ကြမ်းတမ်းစွာအစွမ်းကုန်ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်။၂၃နှစ်နီးပါးစစ်အာဏာရှင် အစိုးရအုပ်ချုပ်ပြီးသည်နောက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသည်အလုံးစုံချွတ်ခြုံကျပြီးပြိုကျတော့မည့်အိမ်အိုကြီးသဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ရသည်ကို မည်သို့မျှငြင်း၍ မရပါ။
ထို့ကြောင့်လက်ရှိတာဝန်လွှဲပြောင်းအမွေဆက်ခံသူသမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သော စစ်ဗိုလ်လူထွက်များအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအလုံးစုံပျက်သုဉ်းသွားသောနိုင်ငံ(FailState) မဖြစ်စေရေးအတွက်ယခင်နှင့်မတူသောမဟာဗျူဟာ၊နည်းဗျူဟာများချမှတ်လှုပ်ရှားလာသည်ကို ယနေ့မြင်တွေ့နေရသည်။
၂၀၀၀ပြည့်နှစ် ဝန်းကျင်ကတည်းက မြန်မာစစ်အစိုးရသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဘေး ဖယ်ထား၍ မရကြောင်း ကောင်းကောင်း နားလည်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်ကဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအစီအစဉ်ဖြင့်အပြောအဆိုသိမ်မွေ့ပြီးပြေပြစ်စွာ ဆက်ဆံပြောဆိုတတ်သူဒုတိယစစ်ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံစကား ပြောရန် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းသည်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏သားတပည့်အရင်းအချာတဦးဖြစ်ပြီး၁၉၉၂ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအာဏာရရချင်းဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကိုထိန်းရန်ဒုတိယစစ်ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ပေးခံရသူဖြစ်သည်။ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းအားအထောက်အကူပြုနိုင်ရန်ဗိုလ်မှူးချုပ်သန်းထွန်းသည် နိုင်ငံရေးနှင့် တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးဌာနမှ တာဝန်ယူပေးခဲ့ရပါသည်။
ထိုစဉ်ကတွေ့ဆုံမှုကိုထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်အဆင့်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။သို့သော်ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏အထူးကိုယ်စားလှယ်ရာဇာလီအစ္စမေးလ်လာရောက်စဉ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းအောင်၏အမှတ်မထင်ပြောဆိုလိုက်မှုကြောင့်တွေ့ဆုံမှုသတင်းနိုင်ငံတကာသို့ ပေါက်ကြားသွားခဲ့ရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ထားရှိခဲ့သောသဘောထားအမျိုးမျိုးအာဏာပိုင်များအတွင်း ကွဲလွဲမှုများရှိခဲ့ပါသည်။ထိုအချိန်ကယခုပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွင်းရေးမှူးဦးအောင်သောင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအမနာပပြောဆို၍အဆန့်ကျင်ဆုံးလည်းဖြစ်သည်။၄င်းတို့၏အစိုးရိမ်ဆုံးအချက်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ကိုသာမြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင် ခွင့်ပြုမည်ဆိုလျှင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သောပြည်ခိုင်ဖြိုးသည်မှေးမှိန်သွားပြီး နိုင်ငံရေးသေသွားလိမ့်မည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။
ထိုအခြေအနေများကြောင့်ဦးအောင်သောင်းသည်ပြည်ခိုင်ဖြိုးဒုဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းနှင့်အတူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဒီပဲယင်း အရေးခင်းဖန်တီးပြီး အစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD ဆွေးနွေးပွဲကို ရပ်ဆိုင်းစေခဲ့ပါသည်။
ဒီပဲယင်းအရေးခင်းကြောင့်နိုင်ငံတကာ၏ပြင်းထန်သောဖိအားများဖြစ်ပေါ်လာရာတဖန်ပြန်လည်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးတင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစေပြီး အမျိုးသား ညီလာခံတွင် NLD ပါဝင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
အဆင်ပြေခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးမည်ဟုကတိပေးခဲ့ပြီးကာမှရက်ပိုင်းအလို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေစိတ်ပြောင်းပြီးNLDအမျိုးသားညီလာခံတက်ပြီးမှ လွှတ်ပေးရန်စဉ်းစားမည်ဆိုသောကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏“ရှင်တို့စစ်သားတွေဖြစ်ပြီး ကတိမတည်ဘူး”ဟူသောမှတ်ချက်ဖြင့်ဆွေးနွေးပွဲ နိဂုံးချုပ်ခဲ့ရပါသည်။
ယနေ့အချိန်အခါတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော်၏ ဦးဆောင်မှု ရှိရမည် ဆို သည့်အတိုင်း နိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီတွင် လက်ရှိစစ်တပ် ခေါင်းဆောင်များနေ ရာအများဆုံး ယူထားသကဲ့သို့ အစိုးရအဖွဲ့တွင်လည်း အရေးပါသော ဝန်ကြီးဌာနများကို ရယူထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် စစ်တပ် အနေဖြင့် လွှတ်တော် နှစ်ရပ်လုံးတွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း ရယူထားပြီး ဖြစ်သည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်ဧပြီလဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေစတင်အာဏာယူစဉ်ကတည်းကပျိုးထောင်ခဲ့သောပြည်ခိုင်ဖြိုး လူမှုရေးအဖွဲ့သည်လည်းနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်လာခဲ့ပြီးလွှတ်တော်နှစ်ရပ်တွင် အများစုအမတ်နေရာများကိုရရှိပြီး အစိုးရ အဖွဲ့ကိုပင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူအနေဖြင့်တင်ပြချင်တာကတော့စစ်တပ်အနေဖြင့်သူလုပ်ချင်သည်များကို တိုက်ပွဲတပွဲတိုက်ရန်အတွက်တိုက်ပွဲလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်း(BattleProcedure)ချမှတ်၍ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာ ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအောင်ပွဲရရေးနောက်ဆုံးအခက်အခဲကိုကျော်လွှားရမည့်အချိန် ရောက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအခက်အခဲကိုကျော်နိုင်ရန်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါဝင် လျှင် မဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအလုံးစုံပျက်သုဉ်းသွားသောနိုင်ငံမဖြစ်စေရန် လက်ရှိအစိုးရသည်မည်သည့်အချိန်ကမျှမပြောဆိုမလိုက်လျောခဲ့ဘူးသောအခြေအနေများကို လျှော့ပေးနေသည်ကို တွေ့ နေရပါသည်။
လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းကိုကြည့်လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ အပေးအယူမျှနေသည်ဟု ဆိုရပါမည်။
လွှတ်တော်အတွင်း နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှနေ၍ NLDဝင်ရောက် လှုပ်ရှားမည့် အရိပ်အမြွက်များ တွေ့မြင်နေရပြီး အနှစ်၂၀ ကျော် ဒီမို ကရေစီ ရရှိရေးအတွက်အသက်ပေး ထောင်အကျခံ ဘဝပေါင်းများစွာ စွန့်လွှတ်စွန့်စား ပေးဆပ်ပြီး ပြည်သူလူထုအတွက် အနစ်နာ ခံခဲ့သောNLDသည်ယခုအခါတွင်ယခင်ကနှင့်မတူ စစ်ဗိုလ်လူထွက်အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်အတွင်းမှနေ၍ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲဝင်ရန် တာစူနေပြီ ဖြစ်သည်။
စစ်ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်လိုသော အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းနှင့် စစ်တပ်အတွင်းမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ထောက်ခံသူအများလည်း မဝံ့မရဲဖြင့် ခေါင်းလေးတွေ ထောင်လာနေကြပါသည်။
အကယ်၍သာအနှစ်၂၀ကျော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆန့်ကျင်ရေးမှိုင်းအတိုက်ခံထားရသော စစ်အစိုးရအတွင်းမှအဆင့်အလွှာ အမျိုးမျိုးကို စည်းရုံးနိုင်မည်ဆိုပါက ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးမကြာတော့ဟု ပြော၍ ရပါသည်။ NLD သည် ကိုယ်ကျိုးမဖက် စွန့်လွှတ်စွန့်စားနေသော နိုင်ငံရေးပါတီကြီး ဖြစ်သည်။
လက်ရှိစစ်အစိုးရအား နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် ခေါင်းထောင်နိုင်ရန် အထိုက်အလျောက်ထောက်ပံ့မှု ပေးခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် လည်း အပြန်အလှန်နားလည်မှု တစ်စုံတရာရသည်ဟု မြင်ပါသည်။ အကြမ်းမဖက်သော လမ်းစဉ် မေတ္တာတရားဖြင့်ချဉ်းကပ် နေ သည် ဟုလည်း ရှုမြင်ပါသည်။
သို့သော် ဒီမိုကရေစီအရေး စိတ်ကူးယဉ်နေယုံမျှနှင့် မည်သို့မျှဖြစ်မလာနိုင်ပါ၊ အလုပ်လုပ်မှရနိုင်မည်ဟု နားလည်ပါသည်။ အသိမ် မွေ့ဆုံး နည်းဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရေး အထူးလိုအပ်ပါသည်။
စစ်တပ်သည်နိုင်ငံရေးကိုစစ်ပွဲတပွဲဆင်နွဲနေသကဲ့သို့ရန်သူ့တောင်ကုန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရန် ရန်သူ၏အင်အားတည်နေရာလုပ်ဆောင်မှု၊ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးရာသီဥတုအနေထား ၊ ဘယ်ဘက်ကတိုက်ရမလား၊ညာဘက်ကတိုက်ရမလားဆိုသည့်မြေပြင်အနေအထား သတင်းအချက်လက်များကို စုဆောင်းထားပြီး ပြင်ဆင်နေပါပြီ။
NLD အနေဖြင့်လည်း စစ်အမြင်စစ်အတွေးအခေါ်ရှိသော လက်ရှိအစိုးရနှင့် စစ်တပ်ကို ဒီမိုကရေစီအရေး မည်သို့ဆွဲဆောင် စည်းရုံး သွားသည် ဆိုသည့် သေနင်္ဂနည်းဗျူဟာများ ရှိလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ အစိုးရနှင့်စစ်တပ် အတွင်း၌ လက်ရှိနိုင်ငံရေးဗျူဟာ ကို ခေါင်းဆောင်များမှတဆင့်ရှင်းပြထားပြီး အသုံးအနှုန်းကအစ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် လိုက်နာရန်တို့ကိုညွှန်ကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် NLD ကိုမည်သို့ဝိုင်းရံပံ့ပိုးပြီးဘာတွေကိုရှောင်ဘာတွေကိုဆောင် ရမည်ဆိုသည်ကို လမ်းညွှန်မှု ပြုစေလိုပါသည်။ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုများမရှိခဲ့ပါလျှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်NLDဘက်မှရပ်တည် ထောက်ခံသူများအနေဖြင့် တယောက်တပေါက်ဖြင့် ညီညွတ်မှုများ ပျက်ပြားနိုင်ပါသည်။
အလားတူစစ်ဗိုလ်ဟောင်းများအစိုးရကိုလည်းလျှော့၍ မတွက်သင့်ပါသည်။လက်ရှိအခြေအနေသည် လွန်ခဲ့သော၁၀နှစ်ကအခြေအနေမျိုးနှင့်ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုစဉ်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အမျိုးသားညီလာခံ ၌ စစ်အစိုးရ နှင့် ပူးပေါင်းရေး ဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်မှာတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပေါ်ပေါက်လာသော အစိုးရ နှင့် ပူးပေါင်းရေးဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်NLDကိုပြည်သူကအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။စစ်တပ်၏လှည့်စားမှု အမျိုးမျိုးကိုလည်း ကောင်း စွာနားလည် သဘောပေါက်ပြီးသူများလည်း ဖြစ်သည်။
စာရေးသူအနေဖြင့်အတွေ့အကြုံအရ သံသယဖြစ်စရာလေးတွေတွေ့နေရပါသည်။ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် သာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့မည်ဆိုပါကအကျဉ်းသားလွှတ်ရေးကိစ္စယခုကဲ့သို့ တုံ့ဆိုင်းနေစရာ အကြောင်း မရှိပါ။
အလားတူတိုင်းရင်းသားအရေးငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စများတွင်ယခုပုံစံမျိုးမလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။ ယခုလက်ရာခြေရာများသည် စစ်အာဏာရှင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ လက်ရာများနှင့်တထေရာတည်း တူနေပါသည်။
စာရေးသူတို့ရှိစဉ်ကတည်းကဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် အကွက်တကွက်ကို သူရွှေ့တော့မည်ဆိုလျှင် သတင်းစာဆောင်းပါးများ၊အနီးကပ်အရာရှိကြီးများမှတဆင့်သူလုပ်မည့်ကိစ္စများကို သတင်းလွှင့်တတ်ပါသည်။
ထို့နောက် အာဏာပိုင်များ နှင့် အရပ်သူအရပ်သား များအတွင်းမှ ထိုသတင်းအပေါ် တုံ့ပြန်ချက်ကို နားထောင်ပြီး လူတွေက သူဘာများ လုပ်မည်လည်း ဆိုသည့် မေးခွန်းများအပေါ် ကျေနပ်နေတတ်သူ တဦး ဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့် ပြည်သူလူထုအား စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလည်း တကယ်စိတ်ကောင်း စေတနာဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွှတ်ပေးသကဲ့သို့ နာမည်ကြီး ကိုဇာဂနာနှင့် အကျဉ်းသား၂၀၀ ကျော်ကိုလွှတ်ပြပြီး အသာလေးချိုထား လိုက်ပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စမှာလည်း ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA)ကို ရှင်းရန် ကျန်တိုင်းရင်းသားများကို အချိုသပ်ထားလိုက် သည်။ ယခုအထိ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ စစ်တပ်က တရားဝင် အနားယူသည့် စစ်ရာထူးခန့်ချုပ် အမိန့်အတွက် မထုတ်ပြန်ရသေး ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါသည်။
စာရေးသူအနေဖြင့် မိချောင်းမင်း ရေခင်းပြနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ ဖြစ်မည်စိုးရိမ်၍ တင်ပြနေရခြင်းဖြစ် ပါသည်။
NLDလွှတ်တော်အတွင်း ဝင်ရောက်သည်ကို ထောက်ခံပါသည်။ ယခုကဲ့သို့နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်မှုသည် ပြည်တွင်းရှိ ပြည်သူ လူထုအတွက် လက်ရှိအစိုးရနှင့် ရင်ဆိုင်ရာတွင် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဟု ထင်ပါသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာရပ်နိုင်ငံများကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မှုများမှလည်း ရှောင်ရှားလိုက်ရာ ရောက်ပါသည်။ စစ်ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်လိုသော စစ်သည်များနှင့် မိသားစုများကလည်း NLD ကိုကြိုဆိုကြမှာ အမှန်ပါ။
သဘောထားတင်းမာသူ ခေါင်းဆောင်ကြီးလည်း အသက်အရွယ်အရ တရားရရန် အချိန်တန်နေပြီဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ အနာဂါတ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအရေး ရှေးရှုပြီး သံဝေဂ ရသင့်ပါပြီ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စာရေးသူ သိရှိကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်များကို တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူအားလုံးလည်း ဒီမိုကရေစီ အရေး စိတ်အေးချင် ကြပါပြီ။ ။
(စာရေးသူအောင်လင်းထွဋ်သည်ဗိုလ်မှူးဟောင်းတဦးဖြစ်သည်။တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံး၌ံမှူးကြီးစသည့် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်၌ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တောင်းခံခဲ့သည်)
Posted by justfreeman at 11:560comments